अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा कसरी लिईन्छ भर्ना ? कुन-कुन महिनामा खुल्छ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २५ बैशाख २०७५, मंगलवार May 9, 2018
नेत्र पण्डित- अष्ट्रेलिया । नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि अष्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ । अध्ययनको लागि जाने बाहाना बनाउदै रोजगारीको लागि जानेको संख्या धेरै नै रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा बेलायतका शिक्षण संस्थामा समस्या देखिएको र अमेरिकामा पढ्न महँगो खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीहरूको ध्यान अष्ट्रेलियातर्फ मोडिएको छ ।
“गमलाको झार हैन ,विशाल छहारि दिने पिपलबोट बनेर बांच्नुहोस्। “-आचार्य राजन शर्मा
जिन्दगीलाई रुपान्तरण गर्न चाहनेहरूका लागि एक बुलन्द आवाज सन्जिव अर्याल , असनेपालअन्युज । हरेक मान्छेमा एक […]
अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? तत्काल सुर्धानुहोस् यी गल्तीहरु
काठमाडौं ।अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने चाहना सबैको हुन्छ । चाहना मात्र भएर पनि हुँदैन । त्यसलाई पुरा गर्न […]